काठमाण्डौ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू कुनै पनि गुटमा नलाग्ने बताउनुभएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफ्नै निवासमा भएको भेटमा उहाँले कुनै सानो वा ठूलो गुटमा नलाग्ने बताउनुभएको उहाँका प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँले विज्ञप्तिमार्फत आफू कुनै निश्चित नेता वा विचार समूहको पक्षमा नभइ पार्टी एकताप्रति दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले ‘अब तपाई के गर्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफमा उपाध्यक्ष गौतमले आफू कुनै गुटमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
यही साउन १३ गते गौतमले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्यका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रस्तावमार्फत उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि पद छाड्न नपर्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई
कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमको समर्थन गर्नुभएको थियो ।
यही साउन १३ गतेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएसँगै नेकपाभित्रको विवाद थप चुलिएको छ ।
दाङ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू पार्टीको कुनै गुटमा नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अहिले पनि आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताउनुभएको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शनिबार आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा गौतमले अहिले पार्टीमा समस्या देखिएको भन्दै त्यो समस्या समाधा...
उज्यालो अनलाइन3दिन पहिले
अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटेपछि महासचिव पौडेलको प्रतिक्रिया : ‘पार्टीभित्रको विवाद गम्भीर मोडमा
उज्यालो अनलाइन4दिन पहिले
अदालतको आदेशपछि वामदेवको प्रतिक्रिया, ‘मेरो विषय पद र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको थिएन’
पहिलो पोस्ट 13 दिन पहिले
‘म कुनै गुटमा संलग्न छैन’: उपाध्यक्ष गौतम
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीभित्र आफू कुनै गुटमा संलग्न नरहेकाले कुनै गुटमा संलग्न नगरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । शुक्रबार आफ्नो सचिवालयमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्नुहुँदै उपाध्यक्ष गौतमले त्यस्तो आग्रह गर्नुभयो । “पार्टी अध्यक्ष दुवै वा एक्लै बोलाएको वैठक वा भेलालाई म गुट मान्दैन, मलाई यो वा त्यो गुटसँग सम्वन्धित गराएर उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्छु” भन्नुभएको छ ।
गोरखापत्र आषाढ २०७७
भैंसेपाटी पुगेर वामदेवलाई प्रचण्डले सोधे : अब तपाईं के गर्नुहुन्छ?
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफू कुनै पनि गुटमा नलाग्ने जवाफ दिएका छन्। गौतमका प्रेस सहयोगी विश्वमणी सुवेदीका अनुसार उनले मंगलवारको भेटमा आफू निश्चित नेता वा विचार समूहको पक्षमा नभई पार्टी एकताप्रति दृढ रहेको स्पष्ट पारेका छन्। 'कमरेड प्रचण्डले ‘अब
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आफु कुनै गुटमा नलाग्ने बताएका छन् । मंगलबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड गौतमको निवासमै पुगेका थिए । उक्त भेटमा नेता गौतमले आफु कुनै गुटमा नलाग्ने जवाफ दिएको पत्रकार एवं गौतमका सहयोगी विश्वमणी सुवेदीले जानकारी दिए । ‘आजको भेटमा अध्यक्ष क. प्रचण्डले उपाध्यक्ष क. गौतमसँग पार्टीसँग सम्बन्धित केही समसामयिक …
प्रचण्डलाई बामदेवको जवाफ : म सानो ठूलो कुनै पनि गुटमा लाग्दिनँ
२१ साउन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आफू पार्टीको कुनै पनि गुटमा नलाग्ने बताएका छन् । मंगलबार विहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफ्नै निवासमा भएको भेटमा उनले आफू कुनै सानो ठूलो गुटमा …
ठूलो सानो कुनै गुटमा लाग्दिनँ
काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई आफू कुनै पनि गुटमा नलाग्ने जवाफ फर्काएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि पुन: लकडाउन गर्ने या के गर्ने विषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञसहितको छलफलमा सहभागी हुन बोला...
वामदेवलाई भेट्न भैँसेपाटी पुगे प्रचण्ड
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न पुगेका छन। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैँसेपाटी भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका हुन्। अहिले केहि समयअघि अध्यक्ष दाहाल उपाध्यक्ष गौतम निवास पुगेका उपाध्यक्ष गौतमका प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले जानकारी दिए।&n...